Charlie | rafozan-doza
Published on 01/10,2015
Mba lasa saina kely mahita an'le hoe tena mavitrika be mintsy ny olona @ fihetsiketsehana manodidina an'le hoe "je suis charlie"
Satria hoe nisy olona 12 tsy manan-tsiny novonoin'ny terrorista tao Parisy noho ny antony a, b, c d...
Dia tsy hay ny tsy hanetsetra hoe t@ ity herin'andro ity ihany koa no nisy ny horohoro tsisy otran'zany tany Nigeria. Izay mety hoe mihoatra ny 2000 mahery no novonoin'ny boko haram. Tsia, tsy hoe mialona na hoe manakely an'ilay terrorisma tany Parisy fa kosa mba te hi-vetsovetso hoe fa dia tsisy dikany ve izany rehefa ny mainty no maty. Efa marina hatr@ fanjanahan-tany fa na izany aza dia mbola @ izao 2015 izao koa ve dia mbola ny omaly tsy miova ihany.
Tsy hoe hiady vitana @ akoho ihany koa. Satria loza ary tena tsy azo ekena tsotra izao ny terrorisma na aiza io na aiza. Ary ra hoe any @ tanin'ny tandrefana no nitrangany ka hoe manao fihetsehana mafonja izy dia rariny tokoa. Mampatsiahy an'ilay siklaonina/rivodoza katrina t@ 2005 izay namely mafy an'ny Bekitana. Dia miteny irery, mahatsiaro ao am-po hoe isan-taona anie otran'zao ny manjo ny Malagasy fa tsisy mahafantatra/miraika... dia izay ee, mangana sy mafy ady eny foana ny zanaky ny mahantra.
Ny tena tsy rariny sy hoe manirikiry @ le toe-javatra otran'izao dia ilay toe-toetra imperialista ananan'ny tandrefana. Rehefa misy olona 12 maty tao Parisy dia lazaina fa tsy azo ekena ny terrorisma... kanefa ra olona 12 izany mety hoe isa-maraina misy otran'zany any Afghanistan, Pakistan, Lybia, Yemen, Syria, Iraq,... vokatry ny fanafihan'ny tandrefana... dia izany ve no tsy otran'ny hoe mpitari-bato vilam-bava? Eny ee, mety hoe misy antony hanaovany izany (ankoatry ny hoe fanan-jahana pure porc) fa le fahasahiana sy fanaovana tsinotsinona ny hevitry ny tompo-tany, ny ain'ny mponina eo antoerana mihintsy no mampi-te hitroatra be... fahafahana toriana any Parisy iniana esorina any @ middle-east, tsy tahotra tsy henatra. Rehefa tsy tandrefana dia tsy rarahiana? mampalahelo... akory atao anefa... miandrandra ny andro hiposahan'ny masoandro sisa no azo atao. A/tra tsy andrin'ny hafa mety ho andriny ihany.
Posted by simplex at 17:34 Hametraka hevitra (5) ¦ Verindrohy (trackback) (0) ¦ Rediredy